Nanambara i Ntsay Christian fa « io daty isokafan’ny taom-piotazana io dia misy Ministera roa izay mandinika momba azy io mba hahazoana ny kalitao satria raha tsy voahaja io dia fantatrareo ny fiantraikan’izany amin'ny lavanila eto Madagasikara. Tsy maintsy mitandrina isika eo amin'ny fametrahana io daty io ».
Tsy mety hipetraka io tsy fandriampahelamana io raha mbola betsaka loatra ny kolikoly sy ny tsy fanarahan-dalana, hoy i Ntsay Christian. Nilaza ity farany fa «izay mitady hanakorontana dia fahavalom-pirenena ».
Nilaza ny praiminisitra fa manomboka amin'ity taona ity dia tsy maintsy apetraka ny TTR (Traitement en Temps Réel) mba hialana amin'ny hoe : tsy ampy ny vesatra anenjehana ireo voarohirohy amin’ny halatra lavanila.
Sambava: Nisintona lakolosy fanairana ireo mpikirakira lavanila tsy voaefa trosa »